Ka xumahay in English. Ka xumahay Meaning and Somali to English Translation
Home>Words that start with S>sorry>ka xumahay (Somali to English translation)
What does ka xumahay mean in English? If you want to learn ka xumahay in English, you will find the translation here, along with other translations from Somali to English. We hope this will help you in learning languages.
Here is ka xumahay meaning in English:
aad xasaasiyad wax?
Aan u cadeeyo
Anigu garan maayo sida loo isticmaalo
Ma waxaad u shaqeeya?
Sidee tahay maanta?
Sorry, waa inaad haysataa lambarka qaldan
Waxaad tahay qof cajiib ah